Cunnooyinka Perricone. Ma amaan iyo waxtarbaa? Quraafaadka iyo xaqiiqda | Ragga Stylish
Marka ay timaado cunista cuntada, dufanka oo yaraada ama miisaanka oo yaraada, dad badan ayaa raadinaya toobiye si looga dhigo sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan. Miisaanka oo kaa yaraada waxay keenaysaa in yar oo gaajo ah, naftaada oo aad ka qaaddo cuntada aad rabto in aad cuneysid iyo in aad xakameyso waxa aad cuneyso. Si kastaba ha noqotee, ma waxaas oo dhan oo ku saabsan rabitaanka luminta miisaanka si dhakhso leh ayaa loo baahan yahay? Maanta waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan ee miisaanka lumiya maxaa yeelay waxaa ku xigta boqoradda Letizia ama waxaa loo haystaa inay raacdo. Waxay ku saabsan tahay cuntada perricone.
Ma rabtaa inaad ogaato haddii cuntadani runti shaqeyso iyo maxay ka kooban tahay? Kani waa qoraalkaaga 🙂
1 Miisaanka si dhaqso ah u lum
2 Cunto Perricone iyo balanqaadkeeda beenta ah
3 Cunnadan ma nabad baa?
Miisaanka si dhaqso ah u lum
Haddii ay jiraan wax dadku rabaan, waa inay ahaataa sida ugu dhakhsaha badan miisaanka ugu habboon. Waayo, Waxay sameeyaan cunnooyin kalooriye ah oo hooseeya, iyagoon lahayn nooc xakameyn ah, ka fogaanshaha cunnooyinka qaarkood ee loo arko inay yihiin "kuwo xun" oo aakhirka ka tagaya ama dib u soo celinaya miisaanka lumay muddo gaaban markay mar kale beddelaan cuntadooda.
Waxa ugu horreeya ee lagu sameeyo kiisaskan ayaa ah in la caddeeyo in erayga cunto uusan macnaheedu ahayn miisaan lumis. Cunnadu waa noocyada cuntooyinka aan cunno si loogu daro nafaqooyinka lagama maarmaanka ah ee aan ugu baahan nahay inaan caafimaad qabno. Sababtoo ah cunnadu waxay diiradda saaraysaa miisaanka oo yaraada macnaheedu maahan inay nafaqo-xumo hayso. Waa run in dufanku lumiyo waa inaan cunno kalooriyaal kayar inta aan maalin walba qarashgareyno. Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maaha in la yareeyo nafaqooyinka qaarkood ama la sameeyo iyaga la'aanteed. Waad luminkartaa culeyska sifiican adiga oo cunaya rootiga ama karbohaydrayt kale oo kujira cuntadaada.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa cuntada perricone. Waxay ka kooban tahay ballan qaad been ah oo kuu dammaanad qaadaya inaad miisaankaaga hoos u dhigto oo keliya 3 maalmood ama illaa 28 maalmood, iyadoo kuxiran habka loo adeegsanayo. Caan ka noqoshada cuntada ayaa u sabab ah taas Waxay adeegsadaan shaqsiyaad caan ah oo Hollywood caan ka ah iyo xubno ka tirsan guriga boqortooyada Isbaanishka sida Queen Letizia.
Waxay hoos ugu degtaa miisaanka oo yaraada iyadoo la iska ilaalinayo welwelka iyo dabeecadaha xun, dardargelinta dheef-shiid kiimikaadka, iyo gaaritaanka saameynta gabowga. Dhab ahaantii maanta, macluumaadka iyo daraasadaha ku dul yaal, wali waxaa loo maleynayaa in isku darka gaarka ah ee cuntooyinka ay qofka ku soo saari doonaan saameyn sixir ah. Tani sidan ma aha.
Cunto Perricone iyo balanqaadkeeda beenta ah
In kasta oo cunnadan ay kaa dhigeyso inaad cuntid qaar ka mid ah cuntooyinka taas oo ah, `` priori '', bulshada aan nafaqada lahayn ay u qaadan karto "xun", waxay kaa dhigeysaa inaad yeelato saameyn "sixir ah". Xaqiiqdu waxay tahay in wax kasta oo dhakhso lagu gaadho ay si dhakhso leh u lumiyaan. Aasaaska cuntadan ayaa ah in miisaanka lumiyo 3 maalmood gudahood iyadoo lagu saleynayo cunista cuntooyinka hodanka ku ah antioxidants. Intaa waxaa dheer, inaad tahay cunnadan oo kale, waxaad heli doontaa saameyn anti-gabowga ah.
Cunnooyinka loo yaqaan 'perricone diet' waxay leeyihiin xaddidaadyo aan la raaci karin wax ka badan 3 maalmood, maxaa yeelay saameyntu waxay noqon karaan kuwo aan faa'iido lahayn. Saddexdaas maalmood oo keliya saamaynta waa inay mar hore muuqataa. Waxaa lagugula talinayaa cunnadan in la cuno cuntooyinka hodan ku ah omega 3 sida kaluunka, cuntada badda iyo ukunta, miraha, dhir udgoon, iniinyaha, digiraha, lowska, badarka, khudaarta iyo probiotics. Qaar ka mid ah mowduucyada ilaa maanta la isticmaalo ayaa sidoo kale lagu talinayaa, sida cabbista sideed koob oo biyo ah maalintii. Waa mamnuuc in la cabo cabitaannada fudud ama la qaato wax cunto ah oo hodan ku ah sonkorta, bur ama dufanka hydrogenated.
Waxa horeyba u ahaa wax la yaab leh oo bilaabaya inay umuuqdaan wax aan caadi ahayn waa taas iska ilaali cunista miraha sida liinta, cambe, qaraha, babayga, mooska, canabka iyo khudaarta qaar sida karootada, bocorka ama baradhada. Waxaan u maleynayaa inay tahay inay tahay sababta oo ah waxa ku jira fructose-ka ayaa ka sarreeya mirahaan kuwa kale. Sidoo kale waxaa sababi kara glycemic index-ka sareeya.Si kastaba ha noqotee, fructose looma beddeli karo si lamid ah sonkorta fudud, laakiin bartaas waa inay iska dhaaftaa.
Cunnadan ma nabad baa?
Waxa ugu muhiimsan waa in la ogaado haddii cuntadani ay caafimaad tahay iyo in kale. Sida cad, Haddii aad isticmaasho xulasho ballaaran oo cuntooyin ah, ma aha wax aan caafimaad qabin. Cunnooyinka aad mamnuucday oo aad u oggolaatay inay ku dhex milmaan si caadi ah caado cunid caafimaad leh. Haddii aad ku darto xaqiiqda ah inay khuseyso oo keliya 3 maalmood, xitaa ka yar.
Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah, iyada oo la tirtiraayo cuntooyinka qaarkood loona ballan qaado miisaanka degdegga ah maalmo yar gudahood, waxay ka dhigeysaa cunto mucjiso ah oo naga dhigeysa inaan rumaysanno inaan ku guuleysan doonno himilooyin maalmo gudahood, wax aan macquul ahayn. Cuntadani waxay bixisaa menus u dhexeeya 3 maalmood ilaa 28. In kasta oo sidaan aragnay, ay na siinayso cuntooyin caafimaad leh oo kala duwan, waxaa jira mamnuucyo aan caqli gal ahayn. Maxaa intaa ka badan, ku celcelinta liiska saddexda maalmood ah, sida oo kale, ma bixinayo kala duwanaansho sidoo kale. Maxaa intaa ka badan, 3 maalmood gudahood, jidhka bini'aadamku lama jaanqaadi karo ama ma mari karo wax isbeddel jireed oo muddo dheer soconaya, marka ballamadan oo dhami waa been.
Miisaan luminta ayaa si khaldan loo sheegay markii la raadinayo yoolka bilicsanaanta. Miisaanku maaha qodobka go'aaminaya caafimaadka, laakiin waa dufanka jidhka. Markaynu nidhaahno waxaan rabnaa inaan miisaanka iska dhuminno, waxa aan dhab ahaan dooneyno ayaa ah inaan dufanno. Waxaa jira dad miisaankoodu yahay 100 kiilo oo ah muruq saafi ah. Dadkani uma baahna inay miisaan lumiyaan. Dabcan waad ku dhimi kartaa miisaanka cuntada nafaqada leh, laakiin annaga ayaa is nacsiin doonna.
Si aad u lumiso miisaanka, kaliya jimicsi saacad oo is miisaan. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa lumisay kiilo. Si kastaba ha noqotee, tani way ina marin habaabineysaa. Kiiloogaas ayaa lumiyey biyo qaab dhidid ah oo aan dufan lahayn, taas oo ka dambaysa wixii aan doonaynno inaan luminno. Si aad u lumiso miisaanka sida dufanka oo aad u ilaaliso muruqyada inta ugu badan ee suurtogalka ah, jidhka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay waqti uu kula qabsado kicintan.
Marka laga hadlayo saameynta gabowga, waxaa jira daraasado badan oo sheegaya taas Suuragal ma aha in lagu beddelo astaamaha maqaarka waqti yar gudahood cuntada. Cunnooyinka leh qaddarka badan ee antioxidants waxay saameyn muddo dheer ah ku leeyihiin maqaarka.
Waxaan ku soo gabagabeynay in cuntooyinka mucjisada aysan mudneyn in la aamino. Luminta dufanka waa hab tartiib tartiib ah, oo u baahan la qabsiga jirka oo ku lug leh isbeddelada caadooyinka cunitaanka in ka badan cuntada dhowr maalmood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Cunnooyinka Perricone